Indlela yokuqala ukucoca kwindlu xa yajika ibe yindawo yokugcina ilahlekile yezinto ezinokutshatyalaliswa. Ungathini kulo mzekelo? Ngoko ke, sikunika iingcebiso zokucoca kwindlu, onokuyithatha.
Okokuqala kwaye kubaluleke kakhulu - ungazami ukuqala ukucoca kwindawo yonke, kuba ngaphandle kokudumala, akuyi kuzisa nto. Qala ukucoca kwindlu oyifunayo ukusuka kwigumbi elinye, umzekelo, ukusuka kwigumbi lokulala okanye ekhishini. Xa ufumanisa ukuba wenze umyalelo kwelinye lamagumbi, unako ukuhamba ngokukhuselekileyo kwenye. Uya kuqinisekiswa ukuba ukuqala ukucoca kwindlu ayiyinto engenamsebenzi, kwaye igumbi elicocekileyo kwindlu yakho liya kuba ngumzekelo ocacileyo. Uphefumlelwe ngumsebenzi wakho wokuqala.
Isiqalo esihle ukusuka apho ungaqala ukucoca kwindawo yokuhlala kunokukhonza njengedesksi eqhelekileyo, uhleli emva koko unokukhangela isicwangciso sokucoca imisebenzi kwindlu. Yenza uluhlu olucacileyo malunga nendlela yokuqala ukucoca kwindlu ethile kwigumbi kwaye ulandele. Ungalondoloza uluhlu njengesikhumbuzo kuwe apho uqala ukucoca kwindlu.
Injongo ebalulekileyo ngaphambi kokuba uqale ukucoca kwindlu leyo umbuzo othi ukucocwa kuqalisiwe. Unokuba ufuna ukukhawuleza udilize izinto kwiindawo, okanye ulungelelanise ngobuchule indawo yokuhlala kwikamelo ngalinye. Xa ukhethe ukhetho lwesibini, cinga ngezenzo omele uyenze kuqala. Ngokomzekelo, sele uphazamisekile ngesofa emnyango, kwaye ufuna ukuwuhambisa kwenye indawo apho kukho ikhabhinethi. Emva koko, ngaphambi kokuba uqale ukucoca kwindawo yokuhlala, susa izinto ezivela kwikhabhinethi kuqala uze uzibeke kwindawo ehlukileyo. Xa umyeni ebuyela ekhaya evela emsebenzini, umcela ukuba ahambise ifenitshala, kwaye ngosuku olulandelayo lokucoceka libuyisele izinto kwikhefu.
Ingongoma elandelayo apho kufuneka usebenze nzima yinjongo yamagumbi kwindlu kunye nokusebenza kwazo. Mhlawumbi kuya kulungele ukwenza igumbi lokuhlala kunye negumbi lokudlela ngaphandle kwegumbi lokulala, kwaye ukusuka kwigumbi lokuphumla elinamanzi, ngenxa yokuba unabantwana ababini bomeleza kwigumbi elinye. Emva koko uza kufuneka ubonise bonke abafazi ukuba balungise ukucoceka okuqhelekileyo - ukutshatyalaliswa kwindlu yakho. Apha, njengoko besithi, into ebaluleke kakhulu kukufumana iphuzu apho uqala khona ukufuduka kwezinto kwindawo, kwaye abanye baya kulandela.
Impendulo yesithathu kumbuzo: kunye noko kuyimfuneko ukuqala ukucoca kwindlu - ukusetyenziswa kwezinto ezindala, ukhohliwe kwigumbi lokugcina okanye kwi-balcony, udibanisa indlu yakho. Ungazivumeli ukuba uzibuze yona imibuzo ehlaba umphefumlo ukuba ingaba isebenzise, ​​umzekelo, isondo elivela kwibhayisikile eliphonswe "jikelele" wokugqibela. Ngaphandle kwehla lokuzisola, liphonse kulo. Apha, okubaluleke kakhulu, ngaphandle kobuqili. Ngaphandle koko, unokukrazula izinto eziyimfuneko ezingasetyenziswa rhoqo. Unokuqala ukucoca kwindlu kunye neluhlu lwezinto eziphukileyo ongaziphosa ngaphandle. Emva koko uza kuba nelithuba elincinane kunye nomdaka omdala ukuphosa izinto ezilungileyo.
Ngoku malunga nobunzima obuya kudibana nabo ngexesha ofuna ukuqala ukucoca kwindawo. Zama kwakhona ukuba ulinganise ngamandla onke amathuba akho okucoca kwindlu. Ukuba igumbi likhulu kakhulu, ngoko ukhangelwa ekucoceni kwindlu yezihlobo ezihlala nawe. Ngokubambisana, kuya kuba lula kuwe ukuba unqobe ubuvila, obuya kuphazamisa indlebe yakho kwindlebe yakho, ukuba le meko ayifuni. Hlola ngokujonga konke okungawuthandi ngokulandelelaniswa kwezinto ezityatyezelwe kwiindlu. Mhlawumbi isihlalo esidala sokugungqa sele sithathwe kwi-dacha, ukuze sikhuphe phakathi kwayo emthunzini wemithi kunye nomoya ofudumele wehlobo. Kwakhona, unokufuna ukuthenga amatya amatsha kwifestile okanye nayiphi enye ifenitshala ukuzisa izinto ezintsha.
Ngoku siza kufutshane kwaye sinqume oko kuthatha ukuthatha isigqibo kwaye uqale ukucoca kwindlu.
Kukho izizathu ezibini ezibalulekileyo. Okokuqala - ukhathele ukwenza indlela yakho phakathi kwezindlu phakathi kwezinto ezihlakazekile. Okwesibini, wanquma ukuhlambulula indlu ukuze uzithokoze nabanye kunye nobuhle, ubuncinane ngosuku. Kodwa ukuzalisekisa le misebenzi, okokuqala kuyakufuneka ube nomnqweno wokucoca indlu. Kwaye kwenzeka ngokukhawuleza kangangokuba uvila ukwenza. Kwaye iminwe okanye izipikili ezinjengezo zinyanyisiwe, kwaye umhlobo-ntombazana akazange ahla okanye ahambe. Nangona kunjalo, kuyimfuneko, emva kokuhlambuluka konke kukubambiso kwesimo esifanelekileyo, esingaze sonakalise ukukhangela kwesikhwama sokuzilungisa phakathi kwelineni.
I-Etiquette: indlela yokunikezela ngeentyatyambo ngokuchanekileyo
Indlela yokulahla izibilini zangaphantsi
Indlela yokukhetha umlomo
I-recipe yesaladi yeSardus
Ingulube ilele e-soy batter
Amazambane ezitshiweyo kunye nomnyo ogqithisiweyo
UAla Pugacheva wachaza malunga namaqanda aqanda
IBrussels Griffon: inkcazo yohlobo
Umzimba omuhle wobugcisa obushushu
U-Anna Wintour wagqiba ekubeni atshintshe isitayela?
Indlela yokwandisa i-libido kubasetyhini